फोरम र नयाँ शक्ति मिलेर समाजवादी पार्टी गठन
संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र नयाँ शक्ति पार्टी नेपालबीच एकीकरण भएको छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिबीच एकीकरण भई नयाँ ‘समाजवादी पार्टी नेपाल’ घोषणा गरिएको छ ।
अध्यक्ष यादव र डा. भट्टराईले सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा पार्टी एकीकरण गर्ने ९ बुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे ।
पार्टी एकीकरण घोषणापछि नेताद्वय यादव र डा. भट्टराईले समाजवादी आन्दोलनको नयाँ युगको प्रारम्भ भएको र यसले सबैखाले उत्पीडनमा परेका जाति र समुदायको हकहितका लागि हिमाल, पहाडदेखि तराईसम्म एकीकृत ढङ्गले अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए । समाजवादी पार्टीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै नेपाली समाजमा विद्यमान जातीय, वर्गीय, लैङ्गिक र क्षेत्रीय असमानता, विभेद तथा शोषणको अन्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको समृद्धिका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
पार्टीमा दुईजना अध्यक्ष हुने भएका छन् । नयाँ पार्टीमा साविक नयाँ शक्तिका संयोजक बाबुराम भट्टराई र फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव दुवै अध्यक्ष हुने सहमति भएको हो । यसअनुसार संघीय परिषद्को अध्यक्ष भट्टराई हुनेछन् भने केन्द्रीय समितिको अध्यक्षमा यादव रहनेछन् । तेस्रो वरीयतामा अशोक राई वरिष्ठ नेताको रुपमा रहनेछन् । त्यसैगरी सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ र उपाध्यक्षहरू नवराज सुवेदी, परशुराम खापुङ, युवराज कार्की, रकम चेम्जोङ, रेणुकुमारी यादव, लालवावु राउत, हिसिला यमी र हेमराज राई रहेका छन् ।
महासचिवहरूमा गंगानारायण श्रेष्ठ, रणध्वज कङ्दङ्वा, रामसहाय यादव छन् । उपमहासचिवहरूमा डम्बर खतिवडा, दानबहादुर विस्वकर्मा, प्रकाश अधिकारी छन् भने सचिवहरूमा मोहम्मद इस्तियाक राई, दुर्गा शोव, परशुराम बस्नेत, प्रशान्त सिंह रहेका छन् । कोषाध्यक्ष विजय यादव रहेका छन् ।
पार्टी घोषणा कार्यक्रममा डा. भट्टराईले समाजवादी पार्टी गठन पृथ्वीनारायण शाहपछिको राष्ट्रिय एकता भएको दाबी गरे । उनले एकल जातीय राष्ट्रवादविरुद्ध संघीय ढाँचाको राष्ट्रिय एकता भएको दाबी गरे । उनले भने, “इतिहासमा ठूलाठूला आन्दोलन गरेका क्रान्तिकारीहरूको एकता भएको छ । झापा विद्रोह, पञ्चायती कालखण्ड, कांग्रेस, माओवादी आन्दोलनका प्रगतिशील, क्रान्तिकारीहरूको एकता धेरै देखियो । दोकान थापेर थोत्रा माल बेच्न आएका होइनौँ हामी ।” नेकपालाई भट्टराईले निभ्ने बेलाको बत्तीको संज्ञा दिए ।
समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कम्युनिस्टहरु विचार र सिद्धान्तबाट च्यूत भएर कमाउनिस्ट भइसकेको आरोप लगाए । पार्टी घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, “सात सालको आन्दोलनको नेतृत्व गरेको पार्टी कांग्रेसको गाडी दस स्टेसन वरै बिग्रिसक्यो । उसको वैचारिक धरातल राजतन्त्र हो । हिजो दुःखी भएका आज खुसी छन्, हिजो सुखी आज दुःखी भएका छन्,” यादवले भने । उनले राजपालाई पनि सटर खोलेर नबस्न भन्दै नवगठित पार्टीका एकतावद्ध हुन आग्रह गरे ।
राजनीतिक आन्दोलन सकिएको भनिए पनि कांग्रेस र कम्युनिस्टको लागिमात्र सकिएको भन्दै यादवले अब शोषित, पीडितको आन्दोलन सुरु भएको दाबी गरे । उनले भने, “कांग्रेस, नेकपाले समाजवाद ल्याउन सक्दैनन् । अब समाजवादीको राजनीतिक आन्दोलन सुरु भएको छ । देश बनाउने उमेरका युवा विदेश लखेटेर, दैनिक पाँचवटा शव भित्रिने अवस्था सिर्जना गर्ने कांग्रेस, कम्युनिस्टले मुलुक बनाउन सक्दैनन् ।”
उदारिकरण र निजीकरणका नाममा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, हिमाल सिमेन्ट, भृकुटी कागज कारखाना बेचिखानेले मुलुक बनाउन नसक्ने ठोकुवा उनले गरे । संविधान संशोधन गरेर प्रदेशलाई साधनस्रोत र अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने उनले बताए । सिमाङ्कन बदल्नुपर्ने र प्रदेशहरु पहिचान र सामथ्र्यमा आधारित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
पार्टीका नेता अशोक राईले सिंहदरबारमा सिंह बस्नुपर्नेमा स्याल कराउन थालेको टिप्पणी गरे । पार्टी घोषणा सभामा राईले अब नेपालमा समाजवादी र त्यस पार्टीविरुद्ध खडा हुने गैरसमाजवादी पार्टीमात्र अस्तित्वमा हुने दाबी गरे । “यो देशको वास्तविक विकल्प हौं हामी । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने अभिभारा समाजवादी पार्टीको काँधमा आएको छ,” उनले भने ।